नेपाललाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै,जलाए उपप्रधानमन्त्री महतोको पुत्ली ! - समृद्ध नेपाल
नेपाललाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै,जलाए उपप्रधानमन्त्री महतोको पुत्ला (भिडियो)काठमाडौं । नेपाललाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माधव नेपाल निकट अनेरास्ववीयुले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको पूत्ला दहन गरेका छन् ।
यसमा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भदै महतोले भने, ‘बहुल भनेको एक जात एक वर्ग, एक समुदाय होइन । सबैको राज्य शासनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो नभएसम्म जनताले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गरिरहन्छ ।
बिद्यार्थीहरुले मुलुकलाई टुक्राउने अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै पुत्ला दहन गरेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । हस्तक्षेपका क्रममा पराजुली लगाएत दर्जनबढी बिद्यार्थीहरुलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपाल बहुल राज्य हुनुपर्ने महतोको धारणाको विरोध भइरहेको छ Source khabarpatrikanp
मेरो देख्नु भयो कस्तो छ यदि भेट्ने मन छ मलाई सम्पर्क गर्नु होला
ऊहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस संक्रमण विश्व महामारी घोषित !
यी चिनियाँ सहकर्मीका कारण भयो बिल गेट्सको सम्बन्धविच्छेद ?
साउदीमै पसिना बगाउँदै थिए, फेसवुक हेर्दा अचानक आफ्नी श्रीमतीले अर्कैको घुम्टो ओढेको फोटो देखे !
आखिर किन स्कुले ड्रेसमै यस्तो गरिन ?हेर्नुस् भिडियो
आँफुभन्दा धेरै वर्ष कान्छा युवकसँग विबाह गरेकी नायिका श्वेता खड्कालाई अर्को यस्तो आपत !